Bharugeriya - ALinks
November 12, 2020 Antika Kumari Bharugeriya, vhiza
Visa yeBulgaria imvumo yakapihwa kune vekunze kuti vapinde, vagare kana kuenda kuairport. Iko kuwanikwa kunozoburitswa muchimiro chekunamatira chakabatanidzwa kune yekune imwe nyika gwaro kana kune imwe chinotsiva
Bulgaria Visa yevaIndia
October 27, 2020 Antika Kumari Bharugeriya, vhiza
Wanga uchironga kushanyira Bulgaria? Asi zvaive zvakavhiringidza kana uchinyorera Bulgaria Indian Visa. Tora zvese zvinodiwa muBulgaria Visa ruzivo, kureva, Maitiro, kukodzera, uye magwaro anodiwa kuBulgaria Visa. Usati wapinda muRepublic of Bulgaria,
Maitiro Ekunyorera Asylum muBulgaria
August 31, 2020 Antika Kumari Bharugeriya, vapoteri
Hupoteri ndipo apo imwe nyika inopa chengetedzo kune vanhu vari kunzwa vasina kuchengetedzeka munyika yayo. Chero ani zvake anobva kune chero nyika anogona kutsvaga Asylum muBulgaria pavanonzwa kutyisidzira kuhupenyu hwake kana kuchengetedzeka. Chikumbiro chekupotera, chakatumirwa